Global Voices teny Malagasy » Meksika: Manam-pahaizana manokana momba ny ady amin’ny fakana an-keriny nisy naka an-keriny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Desambra 2008 20:52 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Meksika, Ady & Fifandirana, Lalàna
Miroborobo ny heloka bevava any Meksika, ka samy tratran'ny fakana an-keriny avokoa na tompontany na vahiny (vazaha). Vao nisy tany Saltillo , Coahuila , raha nentin'olona mitam-piadiana misarontava ny manam-pahaizana manokana momba ny ady amin'ny fakana an-keriny Amerikana Félix Batista. Tonga eto moa i Batista mba hanao seminera amin'ny maha-filan-kevitra avy amin'ny orinasam-piambenana miorina any Texas antsoina hoe ASI Global LLC azy. Tadiavin'ny vondrona (orinasa na fikambanana…) noho ny fahazarana nananany manerana an'i Amerika latina izy amin'ny tetika ialana amin'ity karazan-keloka ity. Na izany aza dia manaporofo izao tranga izao fa mety ho tratrany avokoa na iza na iza.
Latsa-panontaniana amin'izao trangam-pakana an-keriny izao i  The Mex Files :
Misy antontan'isa mametraka fa roa isan'andro eo ho eo ny trangana fakana an-keriny mitranga anyindrindra fa any amin'ny tapany avaratry ny firenena manamorona ny sisintany. Meksika no manana ny tahan'ny fakana an-keriny ambony indrindra manerana izao tontolo izao isan'olona. Tena manohina ny namana sy ny havan'ireny tratran'ny fakana an-keriny ireny ity tranga ity, tahaka ny mpamaham-bolongana Tony Scotti, izay naman'i Batista :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/18/1442/
 Latsa-panontaniana amin'izao trangam-pakana an-keriny izao i: http://mexfiles.wordpress.com/2008/12/16/weird-or-ironic/
 naman'i Batista: http://tonyscotti.wordpress.com/2008/12/16/the-kidnapping-of-felix-batista/
 dia manahy mafy amin'izay dikan'iy raharah aity hoan'ny hafa etoamin'ny firenena:: http://mexicoparalosmexicanos.blogspot.com/2008/12/irona-de-terror-secuestrado-en-mxico-un.html